Evil Dead: The Game, fofon'aina ho an'ny karazana [Analysis] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 11/06/2022 20:55 | General, an-trano, hevitra, Videogames
Ny Evil Dead dia mitondra ny tantara tsy misy henatra tanteraka amin'izao fotoana izao izay tsy azo ihodivirana fa mampahatsiahy ilay iray izay nesorin'i Sam Raimi tamin'ny satrony niaraka tamin'ny trilogy tamin'ny sarimihetsika tamin'ny taona 2013, miampy ny iray farany tamin'ny XNUMX. Fifangaroana tonga lafatra eo amin'ny gore sy ny hatsikana mainty. toa tsy very ny maha-izy azy, mainka fa lany tamingana.
Midina amin'ny fanaraha-maso miaraka amin'ny Evil Dead: The Game ao amin'ny edisiona PS5 izahay ary milaza aminao ny fomba nandresen'ny zavamananaina ambanin'ny tany amin'ny fahaizantsika. Fantaro miaraka aminay ny lalao manaitra ny maso avy amin'ny Saber Interactive miaraka amin'ny vidiny antonony sy sehatra maro.
Amin'ny karazana tsy mety ritra toy ny fahavelomana, dia lasa sarotra ny mahita rivotra madio, na izany aza Evil Dead: Ny lalao dia mahay mihantsy anao, nefa tsy manasarotra anao, fa ampy hamoronana attraction izay mitazona anao eo anoloan'ny fahitalavitra (na monitor) mandritra ny fotoana maharitra. Amin'ny tranga misy anay dia nanararaotra ny dikan-tsarimihetsika vaovao ho an'ny PlayStation 5 (PS5) izay toa tsara araka izay azo antenaina avy amin'ny console izahay, amin'ny resaka fluidity, fandikana ny toe-javatra ary indrindra indrindra, ny fotoana fandefasana.
1 manaja ny tantara
2 Tena manintona an-tserasera
3 milalao toy ny devoly
manaja ny tantara
Evil Dead: The Game dia mamoaka amin'ny antsipiriany sy ny fiaviany ny lalana manontolo amin'ny lalao video, misolo tena ny biby goavam-be sy ny endri-tsoratra izay azontsika jerena mandritra ny andian-tsarimihetsika manontolo. Saingy tsy mijanona eo fotsiny izany, satria ireo mpankafy ny karazana sy ny sangan'i Sam Raimi dia hahita fahafaham-po ny fitakiany satria maro amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ireo sarimihetsika voalaza etsy ambony ireo no aseho amim-pahatokiana.
Amin'ny lafiny iray, ny fampandrosoana ny hetsika azo antoka synthesizes ny fototry ny tantara, natambatra ny fampihorohoroana, hetsika tsy misy ampahefatry ny "mainty" vazivazy. Amin'io lafiny io dia manampy betsaka ny Bruce Campbell (milalao an'i Ash Williams), ary koa ny mpilalao hafa dia afaka nandray anjara tamin'ny lalao video tsy misy karazana fijanonana eo anoloan'ny tsena, izay indraindray, toa te-hisintona tsara ny an'ny sinema.
Mazava fa ny Saber Interactive dia nametraka ny hena teo amin'ny makarakara miaraka amin'ny fikasana hanome voninahitra ny tantara, indrindra amin'ny fanamby irery.
Ny antsipiriany, ny tsy fahampiana izay iaretantsika amin'ny fotoana sasany amin'ny fivoaran'ny tantara sy ny hetsika, ny tsy fahampian'ny loharanon-karena ary ny singa maro hafa, dia miteraka fahatsapana manakaiky ny horohoron-tany sisa tavela amin'ny saga toy ny Resident Evil, na izany aza.e hivadika ho sorisory sy fahatezerana amin'ny fotoana sasany. Raha jerena ny fahatsoran'ny lalao video maro ankehitriny, dia saika mionona isika mahita ny fanamby apetraky ny Evil Dead: The Game amintsika momba izany.
Reseo ireo fanamby apetraky ny kinova tsirairay amin'ny lalao Fanapahan-kevitra ny fahazoana tarehin-tsoratra na singa vaovao manome dikany bebe kokoa ny tantara, noho izany dia safidy tsy azo odian-tsy hita izany.
Tena manintona an-tserasera
Amin'ny fomba Multiplayer dia ahena ny antoko, izany hoe ady eo amin'ny mpampiasa efatra manana toetra samy hafa, sy ny Kandarian Demony. Ny tanjona farany dia ny famotehana ny Necromnomicon, saingy tsy ho vita izany raha tsy misy ireto manaraka ireto:
Tadiavo ny ampahany telo amin'ny sarintany
Pejy iray avy amin'ny Necronomicon
Ho an'izany rehetra izany dia tsy maintsy miady amin'ny andian-tafika isika, toe-javatra feno olona izay ny hany tanjona dia ny hanimba ny fitondran-tenantsika, na dia eo aza ny fahasahiranana azo idirana sy ny fotoana izay tsy manan-tsafidy tsotra izao afa-tsy ny mandositra toy ny kanosa. Aza manahy fa ho lany amin'ny "fahafatesana" imbetsaka ianao vao mahazo izany araka ny filazan'izy ireo: Feno herim-po ny fasana. Indraindray dia tsy maintsy handalo hazakazaka ny paikady.
Raha vantany vao azo ny sabatra dia ho afaka handresy ireo maizina izay miaro ny "tome" isika, izay hirosoana amin'ny fandringanana rehefa manohitra ny andian-tafika ... Ahoana no hataontsika? Mijanona amin'ny fotoana iray amin'ny toerana iray. Mety ho toa mora izany raha tsy voaomana tsara ny zava-drehetra ho anao hiady.
Ao anatin'ny fomba an-tserasera dia afaka misafidy kilasy efatra azo atao isika, ao anatin'izany no hananantsika toetra sasantsasany avy amin'ny tantara. Hanana mpanasitrana isika, dikan-tenin'ny Ash izay mampihena ny tahotra hanatsara ny valin-tenintsika sy ny maro hafa.
Ny tahotra, raha ny marina, dia mekanika tena mahaliana izay manampy fatran'ny hadalana hafa amin'ny lalao. Raha mandany fotoana be amin'ny ady isika, ivelan'ny loharanom-pahazavana, hoy izyHiakatra ny tahotra ny olona ary ho levona ny fifehezana, ka ho mora azon'ny demonia. Aza manahy fa manana fitaovana isan-karazany isika hanakana azy ireo, na dia efa nandray ny mpiara-miasa amintsika aza ny Demonia.
milalao toy ny devoly
Ny fiaraha-miasa mandritra ny ady, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny kilasy ary ny fampiharana ny fihetsika mifamatotra toy ny hoe dihy no tena hanapa-kevitra amin’ny fahombiazan’ny lalao.
Amin'ny lafiny iray, Ny demony Kandarian dia hofehezin'ny mpilalao hafa (mpifanandrina), izay tanjona faratampony dia ny hiaro ny Necronomicon ary raha azo atao, dia hamono ireo tarehin-tsoratra "olombelona" voafehy rehetra. Mba hanaovana izany, afaka manidina manodidina ny sehatra isika, mametraka fandrika ho azy ireo, manana singa lalao toy ny fiara na minion, sy ny maro hafa. Amin'izany fomba izany jNy filalaovana ho olon-dratsy amin'ny sarimihetsika dia tsy vitan'ny hoe misy dikany kely fotsiny, fa mampihomehy be ihany koa.
Etsy andaniny, ny lalao mijaly noho ny fiverimberenana amin'ny fomba an-tserasera amin'izao fotoana izao noho ny toe-javatra miavaka sy ny mekanika. Ary koa, ny filalaovana toy ny Demonia dia lasa sarotra kokoa raha te-hahazo fahombiazana isika, ary azo hatsaraina ny fahatsapana mifehy, indrindra amin'ny traikefa mpilalao tokana.
Amin'ny lafiny iray, ny fampifanarahana ny franchise ary natolotra ho lalao Multiplayer asymmetric dia tena mahaliana. Ny lalao dia manana asa tokony hatao, indrindra raha ny momba ny fanomezana votoaty bebe kokoa, na dia efa nanamafy ny sori-dalana, ny fampandrosoana ary ny fanavaozana azy aza i Saber Interactive. ny vidiny manomboka, avy amin'ny 39,99 euros fotsiny mahatonga azy ho tena mahaliana. Tsy isalasalana fa ho afaka hankafy lalao tsara miaraka amin'ny namanao ianao, izay hanapahana ny choreography amin'ny tanjona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Evil Dead: The Game, fofonain'ny rivotra madio ho an'ny karazana [Analysis]